I-khekhe laseDashi kanye ne-confectionery | Ukuhamba kwe-Absolut
La i-gastronomy yaseNetherlands ayinaso isiko nesiko lamanye amazwe aseYurophu anjengeFrance, iSpain noma i-Italy. Esikhundleni salokho, i- Ikhekhe lesiDashi yaziwa kabanzi emhlabeni wonke. AmaDashi azichaza njengamazinyo amnandi angaguquki athokozela ukupheka nokunambitha zonke izinhlobo zama-dessert namaswidi.
Ngaphambi kokuqhubeka, nasi isexwayiso: okuthunyelwe kwanamuhla kugcwele izibiliboco nezilingo. Akucebisi ukuqhubeka ufundela labo abadla ukudla:
1 Amaswidi ajwayelekile aseDashi
1.1 Ukudonsa kukaZoute
2 Ikhekhe likaKhisimusi laseDashi
2.1 Amakhukhi kaSanta Nicholas
Amaswidi ajwayelekile aseDashi
Unguswidi we-liquorice osetshenziswa kakhulu eHolland, kepha naseBelgium, eLuxembourg nasezingxenyeni ezithile zaseJalimane. I- i-zoute drop ("Uketshezi olunosawoti") kuthengiswa ngamacube amancane, amnyama. Ukubukeka kwayo kufana nokwama-gummies futhi ukunambitheka kwayo kufana kakhulu nalokho kwe- licorice. Kunezinhlobo ezine ezihlukene kuye ngenani likasawoti eliqukethe.
I-liquorice edumile yase-Dutch, i-zoute drop
AmaDashi athi izakhiwo ezithile zokwelapha zibangelwa yi-zoute drop, yize empeleni ziyidla ngoba ziyayithanda. Kwamanye amabhikawozi athengiswa enongwe nge-coconut essence, i-mint, uju, i-bay leaf namanye ama-flavour.
Lokhu inguquko ebucayi, e-caramelized ye-waffle yakudala yaseBelgium (ngesiDashi, avele kusho isiraphu futhi i-wafel kuyamangaza). Le dessert ilungiswa epanini elikhethekile elihlukaniswe ngezikwele. Inhlama isikwa inqamulelwa ukuthulula i-caramel ngaphakathi ngenkathi ilungiswa.
I-Stroopwafel: inguqulo yama-waffle adumile amise okwenziwe ngama-waffle
Ezindaweni eziningi zilungiswa ngokufaka ama-hazelnuts achotshoziwe nge-stroop, kuyilapho kwezinye inhlama inongwe ngesinamoni. Umphumela uhlala umangalisa njalo.
Okudumile vula Ikhekhe elimnandi elenziwe ngemvubelo inhlama eligcwele izithelo (i-apula, ibhilikosi, uphayinaphu, iplamu noma amajikijolo). Kwezinye izindlela zokupheka zekhekhe laseDashi, ezinye izithako ezifana ne-custard noma i-rhubarb nazo zifakiwe.
Kunokuhlukahluka okuhlukile kakhulu kwe-vlaai yendabuko. Irayisi elilodwa, ngokwesibonelo, ligcwele ilayisi nokhilimu, yize kukhona abanye abashaye ukhilimu noma ushokoledi.
Ukuhamba phansi kunoma imuphi umgwaqo kunoma yiliphi idolobha noma idolobha laseNetherlands kujwayelekile ukuthi ikhala lethu liyengeke ngephunga elingenakuphikiswa le-poffertjes. Ezweni lonke kunamadokodo amancane emigwaqo lapho kulungiswa khona laba abancane okwamanje ama-pancake ashisayo anebhotela elicibilikile noshukela oluyimpuphu.
Futhi ezindaweni zokudlela ezinhle zaseDashi, ama-poffertjes athengiswa njengesinongo esimnandi ukuhambisa ikhofi noma itiye. Kukhona ngisho nezitolo ezikhethekile kulo mkhiqizo, okuthiwa umabhebhana.
Ikhekhe likaKhisimusi laseDashi
Amakhekhe amaDashi ahluka kakhulu ngesikhathi sikaKhisimusi. Izikhathi ezikhethekile zifuna ukunambitheka okukhethekile. I- I-Navidad eNetherlands iqala ukugujwa ngoDisemba 6, usuku lukaSanta Nicholas (Sinterklaas).
Amakhukhi kaSanta Nicholas
Ngosuku lokufika kukaSanta Nicholas nezipho zabo, izingane zaseDashi zenza mnandi ukulinda ngokuphuza ushokoledi oshisayo nokudla amakhukhi. Abantu abadala benza okufanayo, yize bephethe ingilazi yotshwala esandleni.
I-Pepernoten yoSuku lukaSanta Nicholas
UPiet, umsizi kaSanta Nicholas, uphethe ukusabalalisa amaswidi phakathi kwabancane: i-pepernoten (amakhukhi amancane amise okwe-rye, uju ne-anise) futhi sibuzoku ujinja. Iphinde isabalalise izingxenye ze- ibhange, ikhekhe eligcwele inhlama ye-alimondi.
Njengakwezinye izingxenye eziningi zomhlaba, usuku lukaKhisimusi eNetherlands lugujwa njengomndeni osondele etafuleni eligcwele kahle. Idili lifinyelela umvuthwandaba nge ukststol, isinkwa sesithelo sezithelo zomvini esivame ukugcwaliswa nokunamathiswa kwe-alimondi. Lekhekhe, iresiphi yakudala e-khekhe laseDashi, lifana nalelo elilungiselelwe eJalimane nakwamanye amazwe ase-Central Europe.
I-cherry esidlweni sikakhisimusi eNetherlands: i-kerststol
Emindenini ethe xaxa yenkolo bakhetha ukufaka i-kerststol esikhundleni sodizethi okhethekile: beschuit wahlangana muisjes, ikhekhe lesipanji laseDashi elimbozwe nge-anise enoshukela. Kuyisibiliboco okugujwa ngaso ukuzalwa kukaJesu nokuthi ngokwengeziwe kunikezwa nokugubha noma yikuphi ukuzalwa unyaka wonke.
Ngosuku olwandulela unyaka omusha, iphunga likawoyela ovela kumafreyimu ajulile aqhamuka emakhishini livamile emakhaya aseDashi. Kuzo okumnandi i-oliebollen, ama-fritters enhlama akhonzwa wodwa ngoshukela owafafaziwe noma agcwaliswe ngezingcezu ze-apula kanye nezithelo zomvini omisiwe.
Okumnandi kakhulu ukuqala unyaka: i-Oliebollen
Kunezinhlobo ezithile zesifunda se-oliebollen (ukuhumusha: "amabhanisi kawoyela"). Endaweni yaseLimburg ngokwesibonelo zimise okwedonathi futhi futhi zilungiselelwe ukugubha iCarnival. Ngakolunye uhlangothi, ezifundazweni ezisenyakatho la ma-fritters alungiswa ngokunakekelwa okukhethekile futhi ayindilinga ikakhulukazi, cishe ayindilinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-khekhe laseDashi kanye ne-confectionery